July 2013 - iftineducation.com
iftineducation.com – Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya xabsiga Nabadsugida Dowlada ayaa waxa ay sheegayaan in uu aad u sii xumaanayo xiriirka ka dhaxeeya nabadoonada beesha Habar Gidir iyo hogaamiyihii hore ee ururka Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir Aweys oo iminka ku xiran halkaas. Qaar ka mid ah Nabadoonadii ka keenay Sheekh Xasan Daahir Aweys magaalada Cadaado ayaa qaarkood waxa ay…
iftineducation.com – Marki ay teleefanka ii soo dirtay Waris waxaa ka soo wareegatay nus saac saacaddu waxay qaddar 20 daqiiqa ah sii dhaaftay saddexdii ama sagaalkii galabnimo qofba siduu u yaqaano, waxaan toos u soo aaday gurigii gacalisadeyda Waris marki aan illinka hore guriga ka sii galaayo ayaan waxaan arkay saddex haween ah oo taagan ganjeelka weyn ee laga galo guriga…
aadan21 / July 18, 2013
iftineducation.com – Wenger ayaa qiray in uu aaminsan yahay in Fabregas uu doonayo in uu sii joogo kooxda Barcelona inkastoo shaki badan uu hareeynayo mustaqbalka laacibkaas ee Cump Nou. United aya dhawaan dalab ula timid Barca oo ku aadan Fabregas xilli Arsenal iyana la xusayo in wiilkooda ay isha ku hayaan maadaama hishiiskii Barcelona kula wareegeen laacibkaasi uu ku jiray qodob…
Kenya oo Itoobiya ka darnaatay iyo dhibaato cusub oo dalka Somalia ku soo wajahan (Xaqiiqo dhici doonta)
iftineducation.com – Siyaasiin iyo aqoonyahano fara badan oo Soomaaliyeed ayaa mudo dhoor bilood ah waxa ay la yaabanaayeen sababta dowlada Kenya ay arimaha Somalia uga dambeeyn la´dahay dowlada Soomaaliyeed oo caalamka oo idil laga aqoonsan yahay. Qilaaf hooseedka Kenya iyo dowlada Soomaaliya ayaa waxa uu ka soo biloowday dagaaladii ka dhacay jubooyinka gaar ahaan xurguftii magaalada Kismaayo balse isfaham waagaan ayaa…
iftineducation.com – Madaxweynaha Khatumo State Maxamed Yusuf ” Indha-sheel” ayaa waxaa uu ka qeybgalay shirii Nairobi oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiin badan oo cabsi geliyey dowlada Soomaaliya kadib kulankasi. Indhasheel ayaa halkaasi hadal la garowsan karo ka jeediyey kaasi oo ku aadanaa inay qaranimada Soomaaliya darteed loo dhibaateeyo shacabka Khatumo oo ay dagaal ba’an ku heyso maamulka Somaliland. Madaxwaynaha Ayaa Siyaasiyiinta…
iftineducation.com – Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdon “Saacid” ayaa maanta la kulmay una hambalyeeyay guddi hawleedka qorshaha New Dealka ama Hiigsashada Cusub, gudigan oo loo yaqaan “High Level Task Force”. “Duruufta maanta dalka ka jirta waa mid loo baahan yahay in wax badan laga badalo, horumar weyna laga sameeyo; qorshan hiisashada cusubna muhiimad gooni ah…
iftineducation.com – Nin u dhashay dalka Maraykanka oo kiciyey buuqii ugu weynaa ee dublamaasiyadeed ee aduunka kaasi oo lagu magacaabo Edward Snowden, islamarkaasina fashiley siraha Maraykanka oo ah in sirdoonka Maraykanka ay dhagaysteen taleefoonada iyo wada sheekeysiga Midoowga Yurub iyo wadamo kale ayaa magangalyo weeydiistey dalka Ruushka. Saraakiil u hadashay dalka Ruushka ayaa sheegey in ay ka fiirsanayaan magangalyada siyasaadeed ee…
Shirkad Joojisey shidaal ka baaraysay Jubbada Hoose
iftineducation.com – Shirkad laga leeyahay dalka Kenya oo qandaraas shidaal baaris ah la gashay dowladda Kenya taasi oo lagu magacaabo Statoil ayaa joojisey hawlo shidaal baaris ahaa oo ay ka waday ceel ku yaala badda gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay sheeganayso dowladda Kenya. Xogtani waxa ay ku jirtey warbixin guddiga Qaramada Midoobey ee kormeerka cunaqabataynta Hubka ee Soomaaliya taasi oo…
Dowlada Ireland oo Maanta Qoysas Soomaali ah ka Qaaday Jasiirada Malta
iftineducation.com – Toban qof oo Soomaali ah oo ka kooban saddex qoys ayaa maanta ka ambabaxay dalka Malta kaddib markii ay dowladda Ireland u ogolaatay in ay siiso magangelyo, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha Malta. Waa markii saddexaad tan iyo sanadkii 2011-kii oo ay dowladda Irish go’aansatay in ay qaaddo koox qaxooti magangelyo doon ah oo…
iftineducation.com – Dawladda dalka Boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo saartay maadaama lagu jiro bishii barakaysnayd ee Ramadan qaanuun cusub iyo digniin wada socda oo ku wajahan dadka aan Muslimka ahayn ee Ajaanibka ah ee dalkaa ku nool. Amarkan cusub waxa lagu jideeyay in aanay dadka Ajaanibka ah ee aan Muslimka ahayn ee dalkaa ku nooli aanay haba yaraatee waxba ku cuni…